काका र फुचुंग्री (भाग– २०) -::नेपाली एकता – विश्वभरिका श्रमजीवीहरुको आफ्नै आवाज
काका र फुचुंग्री (भाग– २०)
फुचुंग्री : कता काका ?
काका : ए नानी ¤ म त बैठकमा गाको थिए । एकता समाजको हिसाब किताब अडिट गर्नु थियो। प्रकाशन नेपाली एकता समाचार साप्ताहिक पत्रिकालाई व्यवस्थित पार्ने निर्णय भयो।
फुचुंग्री : नेपाली समाचार साप्ताहिक पत्रिका त अहिले निक्कै लोकप्रिय पत्रिका पो बनेछ है काका ?
काका : त पनि कति लाटी, किन नबनोस त । सबै कार्यकर्ता पाठक आफै संवाददाता बिक्रेता प्रचारक बनेर रातदिन मेहेनत गरेका छन्। आफ्नो काम धन्दा नोकरी को व्यस्त समयको बावजुद पनि समय मिलाएर प्रगतिशील विचार गित गजल कविता समाचार बनाएर पठाएका छन् । आफ्नो पत्रिकालाई यति धेरै मायाँ गर्छन् पत्रिका समातेर सेल्फी खिचेका छन् । बिक्री वितरणमा खटेका छन् । राता रात लेख समाचारले संगठन निर्माणमा मजबुती ल्याएको छ ।
फुचुंग्री : मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आठौँ अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलनको चहलपहल कस्तो छ नि काका ?
काका : गत २०२१ डिसेम्बर १२ को भोपालमा आयोजित मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय विस्तारित बैठकले आठौ अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलन आगामी २०२२ फरवरी २७, २८ र १ मार्चमा फरीदाबादमा गर्ने निर्णय गर्दै ‘गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार एबं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरौँ।’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । त्यसै अनुरूप विभिन्न क्षेत्र नगर एरिया टोल समितिमा प्रचारात्मक भेला शानदार रूपमा सफल सम्पन्न भएका छन् । सबैतिर उत्साहको माहौल बनेको छ । सम्मेलन सफल पार्न सबै साथीहरू हातेमालो गर्दै जुट्नु भएको छ ।
फुचुंग्री : भर्खर फुटेर गएका भनिने फुटपरस्त जागरण क्लबका भरौटेहरुको स्थिति के छ ?
काका : उनीहरू मसालले क्रान्ति गरेन, भन्दै बर्वराई रहेका छन्, हामीले सुझाव दिएका छौं । अब त आफ्नै केन्द्रीय समन्वय समिति गठन भएको छ त । के को चिन्ता गर्नु हुन्छ र । की आफ्नैमा पनि शंका छ र ? कोई कोई त पाखा लागिसके, हजुर कता जाँदै हुनुहुन्छ ? म त भन्छु प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नै मूल घरमा वापस आउनुहोस् तपाईंको खाँचो छ पार्टीलाई । दुई दिनको जिन्दगीमा केको अवसरवादी अराजकतावादीको भारी बोकेर धर्तीको बोझ बन्नु हुन्छ ?
फुचुंग्री : तिनीहरू त समाजले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका मान्छेहरू होइनन् र ?
काका : हुन्, जागरण क्लबको ईशारामा फुटपरस्त गतिविधिमा संलग्न रहेका अराजक तत्वहरूलाई एकता समाजले कारबाही गरेको हो । तिनीहरू मध्ये सबै गलत छैनन् । इमान्दार र अनुशासित साथीहरु मूल घरमा वापसी गर्दै हुनुहुन्छ । कोही कोही मूल घरमा वापस आईसक्नु भएको छ । पूरा जीवन लगाएका साथीहरुसँग अलग हुन त्यति सजिलो छैन । वर्गिय मायाले अलग हुन दिँदैन । जो हाम्रा थिएनन्, तिनीहरू पाखा लागिसके ।
फुचुंग्री : नेपालमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले के पहिलै हार मानेछ नि काका ?
काका : उफ ! के के सोध्छे यो फुचुंग्री पनि !
काका र फुचुंग्री (भाग– २१)
काका र फुचुंग्री (भाग–१९)
दश रुपैयाँको फूलको मालामा आफ्नो विचार लिलाम् !
काका र फुचुंग्री (भाग १८)